တရားဝင် LEGO အွန်လိုင်းဆိုင်တွင်ယခုရောင်းချပါ
15 / 06 / 2018 ခရစ် Wharfe 1248 Views စာ0မှတ်ချက် 41130 အပန်းဖြေပန်းခြံ Roller Coaster, 42066 Air Race ဂျက်လေယာဉ်, 60162 Jungle Air Drop ရဟတ်ယာဉ်, ၇၀၆၀၇ NINJAGO City လိုက်လံ, 70916 အဆိုပါ Batwing, 75174 ကန္တာရ Skiff Escape, 75529 Elite Praetorian စောင့်တပ်ဖွဲ့, Lego, Lego ဆိုင်, ရောင်းချခြင်း, စျေးဝယ်
သငျသညျ, နွေရာသီကျော်တည်ဆောက်ရန်တစ်ခုခုရှာကြံလျှင်များစွာ Lego themes များအကွာအဝေးကိုဖြတ်ပြီးအစုံသည်လက်ရှိတွင်လျှော့နေကြသည် shop.LEGO.com.
အထူးလျှော့စျေးအများစုသည် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာရှိသည်။ သင်ထိပ်ပေါ်ရှိ VIP အချက်များတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအခါသင့်တော်သောလျှော့စျေးဖြစ်သည်။ ယူကေနှင့်ဥရောပတို့တွင်စုစုပေါင်းရောင်းကုန် ၆၇ ခုရှိသည်။ အချို့ကိုရောင်းပြီးဖြစ်သည်သို့မဟုတ်အထွေထွေဥပစာစကားများရောင်းချပြီးဖြစ်သော်လည်းများစွာသောအရောင်းအ ၀ ယ်များစွာရှိနေသေးသည်။
42066 Air Race ဂျက်လေယာဉ်
60162 Jungle Air Drop ရဟတ်ယာဉ်
70916 အဆိုပါ Batwing
41130 အပန်းဖြေပန်းခြံ Roller Coaster
၇၀၆၀၇ NINJAGO City လိုက်လံ
75529 Elite Praetorian စောင့်တပ်ဖွဲ့
75174 ကန္တာရ Skiff Escape
ဒီကမ်းလှမ်းမှုတွေဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာမပြောနိုင်သေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်သင်စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ဆောင်ခြင်းဟာကောင်းပါတယ်။ လက်တဆုပ်စာသည်ကုန်ပစ္စည်းများပြတ်လပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ထိုအစုံသည်သူတို့၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားပြီဟုဆိုနေသည်။ အကယ်၍ သင်က၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက် ပို၍ ကောက်ယူသင့်မသင့်အားဆုံးဖြတ်ရန်ကြိုးစားနေပါကယခုအခါကျည်ဆန်ကိုကိုက်ပြီးလိုက်ရှာရန်အချိန်တန်ပြီ။
သင်အမေရိကန်၌ရှိလျှင်အကောင်းဆုံးအရောင်းအ ၀ ယ်အများစုမှာကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာရှိနေပြီးဖြစ်သော်လည်းသင်လုပ်နိုင်သည် bargain ဆုပ်ကိုင်.
← ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: ဇိမ်ခံနေထိုင်မှု
LEGO House ယနေ့ Netflix သို့လာမယ့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် →